Baidoa Media Center » Barnaamijka Xanaanadda Xoolha Qeybta 2aad‏
Barnaamijka Xanaanadda Xoolha Qeybta 2aad‏
July 6, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Taarikhadda Cilmiga xanaanadda xoolaha.
Cilmigani waxaa soo adeegsan jirey masaaridii iyo hunuudi hore(Egyptian& Indian
ancient);labo caalim oo waagas noolaa oo laka oranayo paprus of kahun iyo vedic literature, ayaa waxey ahaayeen kuwii wax ka sheegey cilmigan xanaandda xoolaha (1900BCE).
AABAHA CILMIGA XANAANADDA XOOLAHA.
Wuxuu ahaa”AROMAN VERTERNARIAN” la oran jirey “RUNATUS VEGTIUS” oo noolaa (45O-5OOA.D),wuxuu ikhtiraacey ama hindisey buugii uga horeeyey ee cilmiga xanaanaadda xoolaha oo la oran jirey buugaas”BOOK OF VET ARTS”.
Aragtadiisa curadda xoolaha ku dhacaa iyo ilaalintooda ayaa xoogsaarey boogiisa;waxaa isbedel ku sameeyey dadka iyo xoolaha caafimaadkood,waxaan loo aqoonsadey in uu yahay “the father of vet.medicine”.
Sidoo kale waxaa jirey isna qof kale oo RAMON ahaa la oran jirey”slave androcyle” ayaa waxaa soo jiitey suulka cagta libaaxa oo mar walibana cidyaha u jari jirey beertiis dhexdeeda waxaa loo aqoonsadey in uu yahay “the first veterinarian”.
AAS-AASIHII COLLEGE KII UGA HOREEYEY LAGA BARTO CILMIGA XANAANADDA XOOLAHA.
Cilmigani xanaanadda xoolaha casrigani waxaa laga keeney ama asal u ah wadanka faransiiska.
Sanadkii 1664 kii nin la oran jirey”Jacques labessie De solleysel.wuxuu daabacey buug cilmiga xanaanadda xoolaha ah oo dhameystiran,daabacaadani ama shaqadaan uu qabtey waxey aheyd mid aad u horeysey,qarnigii 17th.
Qofkii aas-aasey college ayaa ahaa nin faransiis ah oo la oran jirey”claude bourgelate”,oo noolaa (1712-1779),mr.bourgelate wuxuu xooga saarey heerarka cilmiga xanaanadda xoolaha ,waxaa si weyn u xiisayey fardaha.
Sidoo kale waxaa baaritaan ku sameeyey “glander”;waa ibela ku dhacaa qanjidha jirka neefka ama dadka waana ka guul gaarey ciribtirka cuduradda fardaha ciidamadda faransiiska waagaasi.dabadeedna waxaa uu ka codsadey in uu furro “college vet.medicine” lagu barto cilmiga xanaanaad xoolaha.sidaas darteedi college kii uga horeeyey aduunka lagu barto cilmiga xanaanadda xoolaha ayaa dhibadda looga taagey magaaladda lyon faransa sandku markuu ahaaa 1-junaury-1762.